Ny fahaterahan'ny fiainam-baovao dia tena fahagagana tokoa, tsy takatry ny olon-drehetra ny fahatakarana. Ny eritreritra dia tsy mahatakatra hoe toa tsy misy na inona na inona avy amin'ny zavatra iray dia misy olona kely kokoa, indraindray tsy iray. Ary na dia mety hitera-doza ho bevohoka amin'ny kambana aza ny reny maro dia maro no manatona ny karazana fomba rehetra hanatratrarana izany. Saingy mendrika ny manohitra ny natiora ve izany? Ary tsara sy mora ve ny miaritra ny kambana hatramin'ny fahaterahana hatramin'ny fahaterahana?
Ahoana no mahatonga ny fiainana tsizarizary?
Ny kambana dia mono- sy dizygotic. Ny voalohany toy ny rano kely roa dia mifangaro ary mivoatra rehefa mampisaraka ny atody iray, mihosotra amin'ny sira mitovy. Samy voan'ny hemôlôjia ny foetus ary misy karazam-borona roa. Ny kambana toy izany dia tsy mitovy amin'ny lahy sy vavy, ary matetika ny ankizilahy.
Ny kambana kambana roa, na kambana, dia miseho amin'ny famoahana atody roa miaraka amin'ny spermatozoa roa. Ankoatr'izay, ny fahatanorana dia tsy mitranga ao anatin'ny iray andro ary ny iray amin'ireo kambana dia mety andro maromaro kokoa noho ny iray hafa. Ny sela maniry dia mety avy amin'ny ova iray na avy amin'ny roa. Miteraka fahavoazana mahatalanjona toy izany ary mitranga amin'ny 2% amin'ny tranga ihany. Ny fahantrana amin'ny fahatanorana sy ny fahaterahan'ny mpivady toy izany dia matetika mahavaha olana maro.
Tsy ny olon-drehetra no mahalala, fa satria io karazam-pikarohana io, tahaka ny ultrasound, dia azo natao ny nahitana fa ny fitomboan'ny bevohoka dia matetika kokoa noho ny teraka. Izany hoe, misy zazavavy iray mitoe-jaza roa, saingy amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny fampandrosoana (matetika amin'ny trimestre voalohany) dia misy iray amin'ireo mpivady mijanona amin'ny fivelarana ary zazakely iray ihany no teraka.
Izany dia azo faritana rehefa vita ny fandinihana mandritra ny 5-8 herinandro ary aorian'ny fotoana indray. Ny ultrasound voalohany dia maneho mazava tsara ny atody roa an'ny foetal, ary avy eo, na tsy hita tanteraka, na mijanona ao amin'ny fivoarana. Ny fampiroboroboana ny zaza faharoa manomboka amin'ny fahaterahana hatramin'ny fahaterahana dia mitranga araka ny toe-java-misy eo amin'ny bevohoka.
Olana amin'ny fitondrana vohoka
Zava-mitranga, na kambana dizygotic manana bakteria sy placenta samihafa, tsy miankina amin'ny tsirairay ary tsy manelingelina ny fandrosoana. Fa, mazava ho azy, ny mamanay, izay niteraka fahasambarana indroa, dia avo roa heny noho ny maha-bevohoka azy. Ny toxikose, ny fingadona, ny lanjany, ny oha-pandehanana sy ny aretina aterena dia mandresy ny vehivavy bevohoka toy izany matetika, ary ny fiainana amin'ny fahaterahana hatramin'ny fahaterahan'ny zazakely dia tena sarotra, ary indraindray aza dia atahorana ho salamain'ny reny.
Izany toe-javatra izany ihany no miandry ny renin'ny kamboty tokana. Eto anefa, ankoatra ny olana amin'ny fitondrana, dia misy ny olana mitranga amin'ny fampiroboroboana ny iray amin'ireo mpivady. Amin'ny ankapobeny, ny fahasamihafana eo amin'ny zaza latsaky ny kilao dia mahatratra kilao iray sy iray kilao, raha toa ilay zaza kelikely dia mitazona ny endriky ny taratra rehetra avy amin'ilay olon-dehibe.
Izany dia noho ny fahabetsahan'ny zaza avy amina toerana iray, ary izay miha-mahery kokoa ny ankamaroan'ny fiterahana. Ankoatra izany, misy ny foto-kevitra iray antsoina hoe fanomezana, raha misy iray amin'ireo kambana ireo manomboka mihinana sy mitombo amin'ny vidin'ny faharoa.
Ny herinandro faha-27 amin'ny fitondrana vohoka - inona no mitranga amin'ny zazakely sy ny mamany?
Ny zaza ao amin'ny fitondrana vohoka - fifanoherana
Sakafo mandritra ny 30 herinandro
Famantarana ny fifanatonana
Rahoviana no lany ilay kibo vao teraka?
Herinandro 12 isaky ny fitondrana vohoka - izany hoe firy volana?
Belly tamin'ny herinandro faha-13 amin'ny fitondrana vohoka
Afaka mahazo orana ho an'ny vehivavy bevohoka ve aho?
Amin'ny firy no miteraka ny primiparas?
Mahavariana be fotsy nandritra ny fitondrana vohoka
Fitondrantena maro be isan-kerinandro
Ahoana no fomba hanafoanana ny fampitandremana eo amin'ny tananao?
Sakafo amin'ny jono maitso
Navoaka tamin'ny herinandro faha-8 ny vehivavy bevohoka
Royal Canean Urinari ho an'ny saka
Nanao fanadihadiana lalina momba ny tambajotra sosialy, ankizy ary ny trano fonenany ao New York i Blake Live
Sarin'ny Ninja Turtle amin'ny tananao
Ny zanaky ny anjevitr'i Gwen Stefani sy Gavin Rossdale taloha dia miandry ilay zaza
Cardigan miaraka amin'ny zipera
Ljubistok - fambolena
Fitsaboana ratra madinika
Mischa Barton: olana goavana sy olana momba ny alikaola
Ny fizotry ny fiterahana zaza iray
Biby nipoitra tao anaty lafaoro
Karazana karazana kapoakan'ny lakozia hisafidy?